SUUQA: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kala-iibsiga Cayaartooyda – Garsoore Sports
SUUQA: Wararkii Ugu…
SUUQA: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kala-iibsiga Cayaartooyda
Paris St-Germain ayaa furtay wadahadalo bilow ah si ay u cabirto xiisaha Paul Pogba uu u qabo in iyaga uu kusoo biiro xagaagan ama kan xiga, marka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Faransiiska, oo 28 jir ah, bilaash lagu heli karo. (Athletic)
United ayaa isku diyaarinaysa dalab uga yimaada PSG oo ku aaddan Paul Pogba waxayna ku dooneysaa ku dhowaad ​​45 milyan oo ginni. (Eurosport)
Arsenal ayaa u soo bandhigaysa Inter Milan daafaca dambeedka middig ee reer Spain Hector Bellerin, oo 26 jir ah, si ay ugu bedelato weeraryahanka reer Argentina ee kooxda Inter Milan Lautaro Martinez, oo 23 jir ah. (Football Insider)
Chelsea ayaa lala xiriirinayay weeraryahanka Bayern Munich iyo Poland Robert Lewandowski laakiin madaxweynaha kooxda Jarmalka Herbert Hainer ayaa sheegay in 32 jirkaan uusan bixi doonin. (Goal)
Arsenal ayaa u baahan doonta inay gudbiso dalab ugu yaraan 70 milyan oo ginni ah si ay fursad ugu hesho saxiixa 24-jirka kubbadsameeyaha Leicester City James Maddison, iyadoo xiddiga reer Ingiriis uu qandaraas kula jiro Foxes ilaa 2024. (Sky Sports)
Aston Villa ayaa u soo bandhigtay 30 milyan oo yuuro oo ku aaddan ciyaaryahan Leon Bailey, oo 23 jir ah, laakiin Bayer Leverkusen ayaa 35 milyan ku doonaysa garabka Jamaica, kaas oo sidoo kale xiiso ka helaya Leicester City iyo Wolves. (Bild – Jarmal)
Weeraryahanka Norway Erling Haaland, oo 21 jir ah, iyo garabka Jarmalka Julian Brandt, 25 jir, ayaa sii joogi doona Borussia Dortmund xagaagan. (Tuttosport )
Ajax ayaa xaqiijisay in Arsenal iyo Lyon labaduba ay muujiyeen xiisaha ay u qabaan goolhayaha reer Cameroon ee 25 jirka ah ee Andre Onana, kaas oo ganaax ku maqan kaddib markii uu xadgudub daroogo ah sameeyay. (Voetbal International, via Sun)
Norwich City ayaa isku diyaarinaysa inay dalab 10 milyan oo ginni ah ka gudbiso 19 jirka garabka uga ciyaara Giriigga ee PAOK Salonika Christos Tzolis. (Football Insider)
Barcelona ayaan wali heshiis cusub la gaarin Ilaix Moriba, oo ah 18 jir qadka dhexe oo reer Spain ah kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga soo aaddan waxuuna durba soo jiitay xiisaha kooxaha Premier League. (Marca)
Juventus ayaa mar kale la kulmeysa saraakiisha Sassuolo iyagoo rajeynaya inay dhammeystiraan heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Talyaaniga Manuel Locatelli, oo 23 jir ah, waxayna sidoo kale doonayaan inay la soo wareegaan weeraryahanka reer Brazil Kaio Jorge, oo 19 jir ah, kana tirsan kooxda Santos. (Tuttosport – af Talyaani)
Celtic ayaa wadahadalo la furtay Tottenham si ay ula soo saxiixato goolhayaha 34 jirka ah ee reer England Joe Hart oo ka tirsan kooxda Premier League. (90 Min)
Crystal Palace, Newcastle United iyo Monaco ayaa ka mid ah kooxo dhowr ah oo xiiseynaya ciyaaryahankii hore ee Angers iyo qadka dhexe ee 21 jirada Faransiiska ee Angelo Fulgini oo 24 jir ah (Mail)
Kooxda Tottenham ayaa ka iibisay daafaca reer Belguim ee Toby Alderweireld kooxda reer Qatar ee Al-Duhail lacag dhan 3 milyan oo kaliya inkasta oo uu heshiis kula jiray ilaa 2023 (Sun).
Leeds United ayaa loo sheegay inay qasab tahay inay bixiso 5 milyan oo ginni si ay ula soo saxiixato daafaca dambeedka biddix ee reer Scotland Josh Doig, oo 19 jir ah, kana tirsan kooxda Hibernian xagaagan. (Leeds Live)
Liverpool ayaa seegtay malaayiin ginni kaddib markii ay lumisay daafaca dambeedka biddix ee reer Algeria Yasser Larouci, oo 20 jir ah, isagoo beeca xorta ah ugu biiray Troyes, oo ka mid ah dhowr kooxood oo hoos yimaada calanka Kooxaha Kubbada Cagta ee City sida , Manchester City, New York City , Mumbai City iyo kuwo kale (Mirror)
Ethan Ennis ayaa wadahadalo la yeeshay Chelsea xagaagan laakiin 16 jirka qadka dhexe ayaa doortay inuu ku biiro Manchester United kaddib markii uu iska diiday inuu heshiis cusub la galo kooxdiisii Liverpool. (Liverpool Echo)
Weeraryahanka reer Belgium Aaron Leya Iseka, oo 23 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Championship -ka ee Barnsley isagoo kaga soo biiraya dhanka kooxda Toulouse kaddib markii uu xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay kooxda Metz. (L’Equipe )
Arsenal Oo Bellerin Ku Beddeleneysa Lautaro
Christian Eriksen Oo Qarka U Saaran Inuu Garoomada Kusoo Laabto